Conflict management • Brand You Academy
1. What is Conflict and Conflict Management?
2. Five Questions to Ask Yourself
3. Five Causes of Conflict
4. Five Conflict Management Styles
5. Five Essential Skills
Conflict ဆိုတဲ့ ပဋိပက္ခကို ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရှိသလို၊ ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာလည်း မိသားစု၊ အိမ်ထောင်ဖက်၊ သားသမီး၊ သူငယ်ချင်း စတဲ့သူတွေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ နောင်လည်း ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ ဒီအတွက် ပဋိပက္ခတွေဟာ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတယ်၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ ရတယ်၊ အဲ့လို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ဆရာ ဖြိုးသီဟကနေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Learning Objectives ဘာတွေသင်ယူရမလဲ?
ပဋိပက္ခတွေရဲ့ သဘောသဘာဝ၊ ပဋိပက္ခတွေကို မဖြေရှင်းခင် သိထားသင့်တာတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း ၅ ခုနဲ့ ဖြေရှင်းနည်း ၅ ခု၊ ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေအကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပဋိပက္ခတွေကတစ်ဆင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ရလဒ်တွေ ဖြစ်လာစေချင်သူတွေ၊
လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ် ပဋိပက္ခတွေကြောင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေရသူတွေ၊
ပဋိပက္ခတွေအကြောင်း ခြေခြေမြစ်မြစ် နားလည်ပြီး စနစ်တကျ ဖြေရှင်းလိုသူတွေ တက်သင့်ပါတယ်။
What is Conflict and Conflict Management?
Dr. Nang Nay Nwe Phone Myint
Building Freelance Career